English Movie – မြန်မာသတင်းစုံ
The Aeronauts (2019) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Aeronauts (2019) မြန်မာစာတန်းထိုး =========== ဒီကားလေးကတော့ IMDb မှာ rating 6.6 ရထားတဲ့ Action, Adventure, Biography ကားလေးပါ… “ထိုင်ကြည့်နေရုံနဲ့ကမ္ဘာ့ကြီးဟာပြောင်းလဲမလာပါဘူး၊ကိုယ်နေထိုင်ဖို့ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ လမ်းကသာ ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲစေမှာပါ”တဲ့။စူးစမ်းလိုစိတ်အပြည့်ရှိတဲ့သိပ္ပံပညာရှင် နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် ဂျိမ်းစ် ဂလီရှာဟာကောင်းကင်ကြီးရဲ့ သဘောသဘာဝကိုသာ အပြည့်အဝနားလည်ရင် ရာသီဥတုကို ခန့်မှန်းနိုင်မှာ ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ လှောင်ရယ်သံတွေ အကြား စွန့်စားခရီးနှင်ခဲ့သူပါ။သူတို့ခေတ်သူတို့အခါမှာ …
Togo (2019) ခွေးချစ်တတ်သူ ကိုယ့်အဖို့ခွေးလိမ္မာဇာတ်လမ်းတွေ ကြည့်ဖြစ်တိုင်းဆိုသလို အသည်းကွဲပါတယ် မကြည့်ရသေးခင်ထဲက အဆုံးသတ် ဒီလိုဖြစ်လာမယ်လို့ ကြိုသိနေပါသော်လည်း မ​ဖြစ်လာခင် ဇာတ်လမ်းတဝက်မှာတင် ထိရှရတဲ့အခန်းလေးတွေ ကြုံတွေ့လိုက်ရပြီး ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုအခြေခံထားတဲ့ Togo ဇာတ်လမ်းအကြောင်းပြောပြရရင်…. Togo(Dog) ဆိုပြီးစာလုံးလေးကို Google မှာ ရိုက်ရှာကြည့်လိုက်ရင် သူနဲ့အတူ Balto ဆိုတဲ့ ခွေးလေးတစ်ကောင်ရဲ့ နာမည်ကို Popular Search ထဲမှာတွဲမြင်ရမှာဖြစ်ပြီး …
ဒုစရိုက် အလုပ် လုပ်ပြီး ငွေရှာနေတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက် စတိုးဆိုင်တစ်ခုကို ဓားပြ၀င်တိုက်ပြီးအပြန် လမ်းမှာကားပျက်သွားခဲ့တဲ့အတွက် လမ်းဘေးတစ်နေရာမှာရှိတဲ့ အိမ်ကြီးတစ်အိမ်ထဲကို လူမရှိဘူးအထင်နဲ့ ၀င်ခဲ့ကြပြီး အိမ်ထဲကို ၀င်မွှေကြ တဲ့အခါမှာတော့ အိမ်ပိုင်ရှင် လင်မယားနှစ်ယောက်နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ပြီး အဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ် ဖြစ်ချင်တော့ အိမ်ပိုင်ရှင် လင်မယားနှစ်ယောက်က သားသမီးမရခဲ့တဲ့စိတ်ကြောင့်နဲ့ စိတ်ဝေဒနာ ခံစားနေရပြီး မူမမှန်ကြပါဘူး အိမ်ကြီးရဲ့ မြေအောက်ထပ်မှာလည်း ကလေးမလေးတစ်ယောက်ကို သံကြိုးနဲ့ …
The Furnace (2019) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Furnace (2019) မြန်မာစာတန်းထိုး ==================== မယ်ရီနဲ့မတ်တို့ရဲ့ခရစ်စမတ်အချိန်ကာလလေးအေးချမ်းအေးစက်တဲ့နှင်းမှုန်တွေကြားကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မင်္ဂလာဦးနေ့ရက်လေးတွေပျော်စရာကောင်းပြီးတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အရမ်းချစ်ကြတဲ့ ကြင်စဦးဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပျားရည်စမ်းခရီးလေးကို အများနဲ့မတူပဲထူးခြားစွာ အာဖရိကကအပြေးပြိုင်ပွဲကိုပဲသွားဖို့ နှစ်ယောက်စလုံးစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ပျော်နေခဲ့ရတာ။အာဖရိကရဲ့သဘာဝမြေသားပေါ်မှာ တောတွင်းသားရိုင်းတိ၇္စဆာန်တွေနဲ့အတူသဘာဝတရားကြားမှာ ပြေးလွှားရင်း ဟန်းနီးမွန်းနေ့ရက်တွေကိုတူတူကုန်ဆုံးဖို့အတွက် ရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်မျှော်နေကြတာပေါ့.ဒါပေမယ့် တစ်ကယ်တမ်းမှာ မယ်ရီတစ်ယောက်ပဲပြိုင်ပွဲကိုအရောက်သွားပြီးတော့ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လိုက်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ မတ်တစ်ယောက်ဘာလို့ပြိုင်ပွဲအထိမရောက်လာနိုင်ခဲ့တာလဲ .မယ်ရီရော ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ပြိုင်ပွဲကိုအသက်စွန့်ယှဉ်ပြိုင်ရမလဲဆိုတာကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဇာတ်ကားကြည့်ရန်ဒေါင်းရန်
Warm Bodies =========================== ဒီညတော့ အသေရိုကြရအောင်! Vampire တစ်ကောင်ကိုချစ်နိုင်ပေမယ့် Zombieဆိုရင်ရော ချစ်နိုင်ပါ့မလား? အခုက စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် အလှည့်ပါ။ လူ့ဦးနှောက်တွေစားတဲ့ Zombieတစ်ကောင်နဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းပေါ့။ Zombieတစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Rဟာ သူရဲ့တစ်နေ့တာကို စွန့်ပစ်ခံမြို့က လေဆိပ်ပျက်ထဲမှာ ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်သွားရင် ကုန်ဆုံးလေ့ရှိပါတယ်။ သူ့မှာ Mဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လည်းရှိပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်မဲ့နေတဲ့ သူ့ဘဝထဲကို ဝင်လာတဲ့သူက …
The Witch (2015) ============= အိမ်ထောင်ဦးစီး William..၊ သူ့ဇနီးသည် Katherine..၊ သမီးကြီး Thomasin..၊ သား Caleb..၊ အမွှာနှစ်ယောက် Jonas နဲ့ Mercy တို့ မိသားစုဟာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ခုအပေါ်မူတည်ပြီး သူတို့နေထိုင်ရာအရပ်ကနေ နှင်ထုတ်ခြင်းကို ခံလိုက်ရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ သူတို့မိသားစုဟာ လူသူဝေးရာ တောစပ်တစ်နေရာမှာ အိမ်လေးတစ်လုံးဆောက်ပြီး စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်လို့ အေးအေးလူလူ …
တွမ်ဟန့် ပါဝင်သည့် လေယာဉ်မှူးအခန်း Sully (ဖြစ်ရပ်မှန်ရုပ်ရှင်) လေယာဉ်မှူး ဆော်လီရဲ့ လေယာဉ်ဟာ ငှက်အုပ်နဲ့ တိုက်မိပြီး အင်ဂျင်များ ချို့ယွင်းသွားသဖြင့် ဟတ်ဆန်မြစ်ထဲသို့ ဆင်းသက်ခဲ့ရာမှာ ပါသမျှ ခရီးသည် ၁၅၅ ဦးနဲ့ ဝန်ထမ်းအားလုံး အသက်အန္တရာယ် မရှိခဲ့ကြပါဘူး။ အဲဒီ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ရုပ်ရှင်အဖြစ် ရိုက်ကူးရာ လေယာဉ်မှူး ဆော်လီ နေရာမှာ မင်းသားကြီး တွမ်ဟန့်က …
Slither (2006) မြန်မာစာတန်းထိုး
Slither (2006) မြန်မာစာတန်းထိုး ကြည့်ရဲမှ ကြည့်ကြနော် 😁😁😁 ကြောက်တတ်သူများ နှလုံးရောဂါ အခံရှိသူများ မကြည့်ကြပါနဲ့လို့ ကြိုပြောထားပါရစေ….Slither (2006) သည် သည် IMDb 6.5/10 Rotten Tomatoes 86% Metacritic 69% Google users 83% ဒါရိုက်တာ James Gunn ကိုယ်တိုင်ရေးသားရိုက်ကူးထား၍ Nathan Fillion, …
Play or Die (2019) မြန်မာစာတန်းထိုး
Play or Die (2019) မြန်မာစာတန်းထိုး ထူးဆန်းတဲ့ အိမ်ကြီး တစ်အိမ် ရှိတယ်🏚 တစ်ရက်မှာတော့ ထိုအိမ်ကြီး ထဲတွင်ပြုပြင်စရာများ ရှိတဲ့ အတွက် အလုပ်သမားခေါ်ရာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကိုသာ ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ် အိမ်ကြီးတစ်လုံးတွင် လင်မယား ၂ ယောက်သာရှိပြီး ခြံအကျယ်ကြီး ထဲတွင် အိမ်တစ်လုံး နှင့် လူ ၂ ယောက်သာနေသဖြင့် အမြဲတမ်း တိတ်ဆိတ်နေတက်သည်။ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ …
Isle of the Dead 2016 ………………………….. ကမ္ဘာပေါ်မှာzombieတွေရှိလာရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ဒီကားလေးကကျွန်းတစ်ခုပေါ်မှာရှိတဲ့zombieတွေအကြောင်းရိုက်ထားတာပါ ကျွန်းတစ်ခုပေါ်မှာသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ကစမ်းသပ်မှုမှားပြီး zombieတွေဖြစ်လာတာပါ အဲ့တာကိုနှိမ်နင်းပြီးသိပ္ပံပညာရှင်ကို ကယ်တင်ဖို့အမိန့်ကြတဲ့ စစ်သားတွေက ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ zombieတွေကိုဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ပြီး ဒေါက်တာကိုဘယ်လိုကယ်တင်မလဲ သူတို့အားလုံးကော အဲ့ဒီကျွန်းကြီးကလွတ်မြောက်ပြီးအားလုံးအသက်ရှင်ကြမလား 👇👇👇👇 ဇာတ်ကား​​​ကြည့်ဒေါင်းရန်